Global Voices teny Malagasy » Mpanao Gazety Ao Myanmar Notànan’ny Miaramila, Ary Novonoina Avy Eo · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 09 Novambra 2014 20:39 GMT 1	 · Mpanoratra Thant Sin Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Ady & Fifandirana, Fisamborana sy faneriterena, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona, Feo voarahona
Nitantara momba ny fifandonana vao haingana teo amin'ny Tafika Myanmar sy ny mpitandro ny filaminanan'ny vondrona mpikomy vitsy an'isa Karen  tao amin'ny Fanjakana Mon i Ko Par Gyi, mpiambina an'i Aung San Suu Kyi teo aloha raha nosamborina sy notànan'ny tafika Myanmar tamin'ny 30 septambra. Telo herinandro taty aoriana, nampandre  ny Filankevitra Vonjimaika misahana ny Gazety ao Myanmar ny manamboninahitra miaramila fa namoy ny ainy tamin'ny 4 Oktobra ilay mpanangom-baovao tsy miankina nandritra ny fitànana azy, ary efa nalevina ny nofo mangatsiakany.
Nahatezitra ny maro ny fahafatesan'ilay mpanangom-baovao mbola teo am-pelatananan'ny miaramila ka niteraka famoriam-bahoaka nahitana olona maherin'ny 1000 tao afovoan-tanànan'i Yangon, renivohi-pirenena tamin'ny 26 Oktobra. Nanomboka teo dia niray hina mba hitaky ny hanaovana fanadihadiana  ny nahafatesan'ilay mpanangom-baovao vaovao ireo olom-pirenena, mpikatroka sy vondrona firaisamonim-pirenena miisa 46. Araka ny filazan'ny Radio Free Asia , mpanao fihetsiketsehana teo amin'ny 20 teo no nosamborina ary voampanga amina andinin-dalàna tsy voafaritra ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana.
Nilaza ny tatitra ofisialin'ny miaramila fa voampanga  ho niasa toy ny “‘mpiandraikitra serasera” ao amin'ny vondrona mpanohitra mitam-piadiana Karen (DKBA – Democratic Karen Benevolent Army) i Ko Par Gyi ary voatifitra izy raha saika haka basina mpiambina iray mba handositra ny fonja. Nilaza na ireo lehiben'ny Karen na ny fianakavian'i Ko Par Gyi fa tsy manana fifandraisana amin'ny vondrona velively izy. 
Tsy mino ny filazan'ny miaramila i Than Dar, vadin'ilay mpanangom-baovao,  sady mpikatroka manohana ny demaokrasia fa niezaka nandositra ny fonja ny vadiny. Miahiahy izy fa nampijaliana sy novonoina ny vadiny, ka nangataka fanadihadiana lalina mikasika ny nahafatesany izy, anisan'izany ny fandevenana azy sy ny fandidiampaty mba ahafantarana ny nahafaty azy.
Mihevitra kosa i Min Ko Naing, avy ao amin'ny fikambanana 88 Generation Peace sy ny Open Society fa nomena fahefana be loatra ny miaramila kanefa tsy mba nangatahana ho tompon'andraikitra amin'izay nataony. Nandritra ny fanehoan-kevitra tamin'ny fihetsiketsehana no nitanisa  ireo andinin-dalàna tao amin'ny lalàmpanorenana miaro ny tafika izy :
Ko Ko Gyi, mpikatroka politika avy ao amin'ity fikambanana ity ihany koa mihevitra fa tsy misy fanajana lalàna sy fiarovana ao amin'ny firenena. Hoy izy :
Nay Myo Zin avy ao amin'ny Fikambanana Fampandrosoana Ara-tsosialy ao Myanmar kosa mihevitra  fa ny fahavononan'ny miaramila hanonitra ny fianakavian'ilay mpanangom-baovao namoy ny ainy dia midika fa “tsy manan-danja noho ny bala ny olom-pirenena”.
Moethee Zun, mpikatroka politika sy mpanorina ny Antoko Demaokratika hoan'ny Fiarahamonina Vaovao, nilaza  fa tsy tokony novonoin'ny miaramila izy na dia lazaina fa niezaka nandositra aza: :
Mihevitra  ihany koa ilay bilaogera Zay Nyein fa tsy azo atokisana ny fiampangana nolazain'ny tafika:
Moe Thway avy amin'ny Generation Wave, iray amin'ireo mpikarakara ny fihetsiketsehana, kosa nandrisika  ny vahoaka mba hanohana ireo mpanangom-baovao.
Mampiseho indray ity vono olona farany ity fa ilaina maika ny fiarovana  ireo mpisehatra amin'ny fampahalalaham-baovao ao amin'ny firenena. Na dia efa nofoanana aza ny filankevitra mpanao sivana, tsiaro ratsin'ny fanohizana ny famerena ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety sy ny demaokrasia ao Myanmar ny fahafatesan'i Ko Par Gyi.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/11/09/65538/
 vondrona mpikomy vitsy an'isa Karen: http://www.rfa.org/english/news/myanmar/fighting-09292014180208.html
 Araka ny filazan'ny Radio Free Asia: http://www.rfa.org/english/news/myanmar/charges-10282014185104.html
 tsy manana fifandraisana amin'ny vondrona velively izy.: http://www.reuters.com/article/2014/10/28/us-myanmar-journalist-idUSKBN0IH1MD20141028
 Hoy izy: https://www.facebook.com/The88Generation/posts/563065647157534